Ngabe angaphatha nakulokhu uNetanyahu - Bayede News
Kuthikameze izinhlelo ukuhlehla kokhetho eNigeria
UNDUNANKULU wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ungomunye walabo abagaqele esobundunankulu kwa- Israeli. Leli lizwe lizoba nokhetho lokuqoka amalungu ePhalamende likazwelonke mhla ziyisishagalolunye kuMbasa. NgokoMthethosisekelo waleli lizwe, amalungu ePhalamende likazwelonke iwona aqoka uNdunankulu.
Uma kwenzeka eqokwa nakulo nyaka uNetanyahu kuyobe sekuyihlandla lesihlanu enguNdunankulu wakwa- Israel. Waqala ukuqokelwa kulesi sikhundla ngowe-1996, waphuma ngowe-1999. Wahluleka ukubambelela kulesi sikhundla njengoba aqunjwa phansi u-Ehud Barak okhethweni lukazwelonke lwangowe-1999. Emva kwalokhu kuhlulwa wanyamalala iminyaka kupolitiki, waze wabonakala ngowezi-2003 esebuya waba nguNgqongqoshe Wezezimali, waze waphuma ngowezi-2005. Emva kokuphuma kwakhe kuHulumeni kazwelonke, wabe eseqokwa njengomholi weqembu iLikud ayihola kuyiwa okhethweni lukazwelonke lwangowezi-2006. Ngowezi-2009 kwaphinda kwabanokhetho lukazwelonke, okuyilapho uNetanyahu aqokwa khona ngamalungu ePhalamende njengoNdunankulu wakwa-Israel. Kulandela lokhu kuqokwa akabanga esabheka emuva njengoba ngokhetho lwangowezi-2013 waphinde waqokwa, kanjalo nangolwangowezi-2015. Lokhu kusho ukuthi uma kwenzeka eqokwa futhi nakulo nyaka, kuzobe sekuyihlandla lesihlanu ehleli kulesi sikhundla, kanti kuyobe kuyihlandla lesine kulandelana.
Kusukela ngokhetho lwangowezi-2013, iqembu likaNetanyahu iLikud alikaze lathola izihlalo ezingaphansi kwezingama-30 ePhalamende elinezihlalo eziyi-112, okulenza lilanywe kude amanye amaqembu. Njengoba uMthethosisekelo ugunyaza ukuthi oqokwa njengoNdunankulu kumele esekwe amalunga angama-61, kuhlezi kuyiphoqa iLikud ukuthi yakhe uHulumeni wokubambisana namanye amaqembu ukuze akwazi ukuba wuNdunankulu uNetanyahu.
Amaqhinga awasebenzisayo uNetanyahu ukuphumelela okhethweni avamise ukubangisa omkhulu umsindo emazweni omhlaba, kodwa yize kunjalo usalokhu eyintandokazi emphakathini wakwa-Israel njengoba nocwaningo lwangesonto olwenziwe iChannel 12 kanye neKan luveza ukuthi akanamelami lo mholi kulolu khetho. Nakuba umholi wenhlangano esungulwe ngoZibandlela wanyakenye i-Israeli Resillience uBenny Gantzn eqale ngomfutho, kodwa abacwaningi bemiphumela yokhetho basambeka ngemuva kukaNetanyahu ngokwesekwa ngabantu.
Ukuqondisisa kahle indlela asebenza ngayo kupolitiki uNetanyahu, kuyomele sibuyele emuva ngesikhathi esakhankasela ukuqokelwa ihlandla lokuqala kwesobundunankulu. Ukhetho lwaluzoba ngowe-1996, kanti kusukela phakathi nonyaka we-1995 zaseziqalile zithelana ngodaka phakathi kukaNetanyahu nowayenguNdunankulu owayelwela ukubambelela kulesi sikhundla ngaleso sikhathi uYitzhak Rabin.
Iqhinga alisebenzisa kulo mkhankaso kwaba wukugxeka isivumelwano i-Oslo Accords sokuhlalisana ngokungathusani phakathi kwe-Israel nePalestine, eyayimelwe umholi wePalestine Liberation Organization (PLO) uYasser Arafat. Lesi sivumelwano sasithembisa ukuphela kokuhlaselana phakathi kwala mazwe omabili.
Enkulumweni mpikiswano eyayingoLwezi, uNetanyahu wathi into efanele uNdunankulu uRabin ukuthi; “Akasuswe emlandweni wamaJuda… akakucabangeli ukuphepha kwamaJuda”. Le nkulumo yadala ukuthi kube khona asebeyihlaba indaba ye-Oslo Accords. Wabe eseziphendulela ngokuthi abambe imashi eyayeseka lesi sivumelwano uNdunankulu uRabin, okuyilapho okwaqhamuka khona uYigal Amir, owayengomunye wababengahambisani nalesi sivumelwano. Wayehlomile ngakho wafike wamdubula wafa uNdunankulu. Kwayiwa okhethweni lwangowe-1996 engasenambangi emdlisela ogageni uNetanyahu, wabe eseqokwa kanjalo ekubeni uNdunankulu wakwa-Israel.
Ekhuluma kunkomfa yokugqugquzela ukuphepha eMunich umholi we-Israeli Resilience uGantz uthe; “WuNetanyahu kuphela onesibindi sokuqhubeka nokuqhoqhobala amandla ombuso ekubeni ulandelwa wuxhaxha lwamacala enkohlakalo.” Kuyiwa kulolu khetho nje uNetanyahu ulandelwa amacala amathathu enkohlakalo.
Kophezulu amaphoyisa akhipha izincomo zokuthi avele enkantolo ukuzoziphendulela uNetanyahu njengoba ubufakazi buqanda ikhanda ukuthi uyabandakanyeka emacaleni amathathu enkohlakalo kanye nokusebenzisa isikhundla sakhe njengoNdunankulu ngendlela engavumelekile. Lezi zincomo zisalinde ukuqinisekiswa nguMshushisi Jikelele u-Avichai Mandelblit ukuthi ziyabuveza yini ubufakazi obungaya enkantolo.
Icala elihamba phambili kuwona wonke la macala ngelenzeka ngowezi-2014 lapho uNetanyahu yize wayenguNdunankulu, kodwa waphinde waziqoka njengoNgqongqoshe Wezokuxhumana. Izinsolo zithi wayelekelela inkampani iBezeq kaMnu u-Elovitch ukuthi iphume ezikweletini ukuze izombhala kahle ezinhlakeni zayo khona ezozigcina eyintandokazi kubantu. Le nkampani iphethe uxhaxha lwamaphephandaba, iziteshi kanye nezizindalwebu zezindaba. Amaphoyisa lokhu akuchaza njengokusebenzisa amandla ombuso ngendlela evuna wena siqu sakho, okuyinto engahambisani nomthetho. Eziphendulela ngalezi zinsolo uNetanyahu wathi kuyinto ejwayelekile kupolitiki ukuthi kwenzeke kanje , ngakho-ke kuyamumangaza ukuthi iphutha likuphi uma sekwenziwa uye.
Umholi weHatnuah uTzipi Livni umemezele ukuhoxisa iqembu lakhe ekungeneleni lolu khetho, kanti kulokhu kuhoxa kwakhe usole uNetanyahu ngokusebenzisa ipolitiki engcolile ukuze azuze amavoti. Ngolwesibili uNdunankulu ubhece imbangi yakhe uGantz ngokuhlangana nowayenguMengameli wase- USA uBarack Obama bezama ukuphoqa i-Israel ukuthi iqede uhlelo lwayo lokwakha eWesbank okungumhlaba wasePalestine. Kuzokhumbuleka ukuthi ngowezi-2001 uNetanyahu waqoka uGantz njengomholi wombutho wezempi wakwa-Israel. Kwaba khona ukungezwani phakathi kuka-Obama noNetanyahu kubangwa indaba yokwakha eWestbank.
KuTwitter, uNetanyahu wahlobanisa uGantz nezitha kulolu daba njengoba babefuna iphume iphele i-Israel eWestbank. Owayeyinhloko yombutho wezempi ngaleso sikhathi uMoshe Ya’alon, ohola iqembu iTelem eselabopha amaxhama okusebenzisana ne-Israeli Resilience, ukuchithe njengamampunge lokhu wathi useqalile uNetanyahu ufuna ukuzenza muhle ngabanye abantu ekubeni kuwuye qobo lwakhe owabhala isivumelwano sokungaqhubeki nokwakha eWestbank no-Obama.
NgoNtulikazi wanyakenye uNetanyahu wasayinda umthetho amazwe omhlaba kanjalo ne- United Nations (UN) abawuhlaba njengonokucwasa iNation-state. Lo mthetho ubalula ukuthi i-Israel ingeyamaJuda kuphela, iHebrew ilona limi kuphela olugunyaziwe kanti i-Arabic ingulimi kuphela olukhulunywa ngabanye abahlala kwa-Israel abadabuka emazweni amaSulumane. Ukwakha eWestbank kanye nokwenza iJerusalem ikomkhulu kuyinto eseqhulwini lezinhlelo zikaHulumeni. Lo mthetho uhlatshwa njengonokucwasa kwazise kunenqwaba yamaSulumane ahlala kwa-Israel izingxenye eziningi zezwe lawo iPalestine zagwinywa i-Israel empini yangowezi-1967 okubalwa kuyo nayo iJerusalem.
NgoMasingana uNetanyahu uphinde wamemezela ukuthi sekuzoba nemali ezodonswa esikhwameni sentela abayinika uHulumeni wasePalestine ukuze kuzonxephezeleka bonke labo abalimalayo nemindeni eshonelwayo ngenxa yokuhlasela kophumasilwe basePalestine. Ngokwababhali, lokhu kusho ukuthi uNetanyahu uzimisele ukuqhezula imali eyevile kumadola ayizigidi eziyi-338 njalo ngonyaka esikhwameni sentela esinamadola angusigidimbili ($1bn).
Izazi zepolitiki zihlaba iqhinga elingcolile likaNetanyahu lokuzenza samuntu obhale ngephutha kuTwitter ukuthi iyavuthwa impi phakathi kwelakhe ne-Iran njengoba esesebenza ngokubambisana namazwe angomakhelwane. Nakuba exolisile wathi bekuyinkulumo abeqonde ukuthi ibe yimfihlo, kodwa ezinye izazi zithi ukwenze ngamabomu lokhu ngoba ezama ukukhuphula imimoya yalabo abaseka ukushabalaliswa kwe-Iran kwazise kade zazisikazana. Kuzokwazeka ukuthi uNetanyahu ubona i-Iran njengesitha sokuqala ezweni lakhe njengoba wajabula wathi aphume nobomvu ngesikhathi kuphuma u-Obama ekubeni nguMengameli wase-USA owaxegisa unswinyo lwezimali olwalubhekiswe e-Iran emva kokusayinwa kwe-Iranian Nuclear Deal. UMengameli uTrump wangena maqede wahoxa kulesi sivumelwano, okuyinto azishaya isifuba ngayo uNetanyahu ayibiza ngokuqinisekiswa kwezokuphepha kwa-Israel.
Abaqageli bemiphumela yokhetho bathi isazoqhubeka ithole izihlalo eziningi ePhalamende iLikud eholwa uNetanyahu. Akungabazeki ukuthi akaconsi phansi kwabaningi lo mholi. Umbuzo kodwa uthi ngabe konke lokhu kuthandwa kungenxa yokudlala ngendlela engcolile?
nguMfo waKwaNomajalimane Feb 21, 2019